M/weynaha Puntalnd uu guddoomiyaha gobolka Karkaar u magacaay Cabdiqur?aan Maxamed Aadan. – Radio Daljir
M/weynaha Puntalnd uu guddoomiyaha gobolka Karkaar u magacaay Cabdiqur?aan Maxamed Aadan.
Garowe, Nov 25 – Wareegto maanta ka soo baxday xafiiska M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole, ayaa lagu magacaabay guddoomiyaha cusub ee uu yeelan doono gobolka Karkaar.
Wareegtadaan oo lambarkeedu ahaa 97, kuna taariikheesnayd maanta oo bisha November ay tahay 25, ayaa guddoomiyaha gobolka Karkaar loogu magacaay Cabdiqur?aan Maxamed Aadan, kaasi oo ah nin aan horay ugu soo jirin siyaasadda isla markaana haatam ku cusub.
Sida ku cad qoraalka m/weynaha ee lagu magacaabay guddoomiyaha gobolka Karkaar, waxaa lagu xushay karti, aqoon, iyo waayo aragnimo uu u leeyahay dadka iyo deegaanka gobolka Karkaar, waxaana sidoo kale uu m/weynuhu magacaabistiisa kala tashaday wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dawladaha hoose ee Puntland.
Magacaabista guddoomiyaha cusub, ayaa ku soo beegantay xilli falal ammaan darro muddooyinkii ugu danbeeyey ay ka taagnaayeen magaalada Qardho ee xarunta gobolkaasi, waxaana labadii todobaad ee ugu danbeeyey lagu dilay labo sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada dawladda Puntland.
Dhanka kale maanta magaalada Qardho waxaa ka dhacay bannaanbaxyo nabadeed oo looga astakoonayey falalka amni xumo ee ku soo kordhaysay halkaasi, waxaana waddooyinka magaaladaasi iskugu soo baxay boqolaal dad ah oo muujinayey cabashooyin kuna dhawaaqayey hal ku dhigyo nabadeed.
Dadka oo isku tagey fagaarayaal ku dhaxyaalla magaalada Qardho ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqan iyo maamulka halkaasi ka jira, waxayna ay dalbanayeen dadku in ammaan wax laga qabto.
Magaalada Qardho uu xarunta u ah gobolka Karkaar ardhawaale waxay daris la noqotay fal danbiyeedyo abaabulan, kuwaasi oo badankooda lala beegsanayey saraakiisha ciidanka ammaanka ee deegaankaasi ka hawlgal.